Wushu ho an'ny Beginners
Wushu amin'ny dikanteny dia midika hoe tsangambato shinoa. Nipoitra taonjato maromaro lasa izay tany Shina ary nandritra ny fotoana ela dia noheverina fa mistery indrindra amin'ny asan'ny martiora rehetra, ary ny tantaran'i Wushu dia niverina tany amin'ny fahiny. Hatramin'ny fahiny, ny fankahalana rehetra an'i Wushu dia notazonina tao anatin'ny tsiambaratelo hentitra, dia karazam-pianakaviana ary navotsotra hatramin'ny taranaka fara mandimby. Amin'izao fotoana izao, misy ny fomba amam-panao sy ny torolalan'ny sekoly Wushu. Saingy ny fototra iraisan'ny tanjona rehetra dia ny filàna ny hanatsara ny fanahy sy hanamafy ny vatana. Ary raha iray amin'ny teny iray ny fototry an'i Wushu dia filôzôfia izay ahafahan'ny olona manapaka ny natiora nefa tsy mandika ny lalàna.
Amin'izao fotoana izao dia misy faritra roa ao Wushu - fanatanjahan-tena sy nentim-paharazana. Ny fitiliana ara-panatanjahan-tena dia misy fetrany, indrindra fa ny fomba toy ny kôlôba sy ny famelezana ny lohalika, eo amin'ny fototry ny karandohany, ao amin'ny hazondamosina ary ao amin'ny tsinay dia voarara. Ao amin'ny làlana mahazatra (ady), dia azo atao avokoa ireo teknika rehetra ireo. Ny kilasin'i Wushu ao amin'ny fitarihana ara-panatanjahantena dia tena mahasoa amin'ny fahasalamana: mampivelatra ny fahaiza-manao sy ny fandrindrana, manamboatra fahaiza-manao acrobatic. Ary amin'ny farany dia voantso izy ireo hitarika ny mpanao fanatanjahantena handray anjara amin'ny fifaninanana, fandresena ary loka.
Ny tombam-bika nentim-paharazana dia tsy midika hoe fifaninanana, ary ny teknikan'ity fitarihana ity dia mikendry ny hiaro haingana, hanilikilika ny fahavalo ary hanafika azy avy hatrany. Amin'izao fotoana izao dia mihaona amin'ny fifandraisana wushu ny fifaninanana, saingy ny ankamaroany dia mibaribary sy manondro. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny wushu nentim-paharazana dia ny famindrana mivantana ny traikefa, ny fahaiza-manao sy ny fomban-drazana ny mpitolona tokana avy amin'ny mpampianatra amin'ny mpianany.
Raha ny tanjonao no tsy nandresy, ny loka sy ny medaly, fa ny fanamafisana ny fahasalamana sy ny fampiofanana ny vatana, dia tsara ny manao gymnastics ho an'i Wushu ho an'ny mpandray anjara, izay aloha dia hanampy amin'ny fampivelarana ny fiaretana sy ny tanjaka, hanatsara ny fizakan-tena sy ny fahamarinan-toerana ara-tsaina.
Wushu ho an'ny vehivavy
Ny zavatra manan-danja indrindra rehefa tafiditra ao amin'io ady io ianao dia ny fananana akanjo marefo. Ny mpitsabo an'ity artikaly miaramila ity dia milaza fa mila mitafy akanjo izay matetika arosonao ianao ary matetika hita eny amin'ny arabe. Na izany aza, ho an'ny fampiofanana feno dia tokony hifanaraka araka ny fenitra tsirairay sy ny lamina manokana ny akanjo ho an'i Wushu.
Amin'ny ankapobeny, ny akanjo ho an'ny fampiofanana dia ahitana setika maro izay natao ho an'ny toetr'andro hafa. Ho an'ny fampiofanana isan'andro dia hanao ny T-shirt sy ny pantsy kodiarana iray hatao. Ho an'ny fampiofanana an-kalamanjana amin'ny toetr'andro mangatsiaka, ny leggings dia mitafy pataloha sy jiro manokana (doi).
Noho izany, ho an'ny kilasy Wushu mila anao:
bandy, doi, T-shirt;
Trousseau miaraka amin'ny tarika elastika eo amin'ny pataloha;
Pantalon tsy misy elastika amin'ny pataloha.
Ny akanjo dia manjavona indrindra amin'ny 100% kotona, na 95% kotona ary 5% lycra. Ny lamba misy ny kofehy Lycra dia manana elasticity lehibe.
Ny singa tsara indrindra amin'ny kilasy Wushu dia tsy mila fitaovana sy fitaovana manokana i Wushu. Amin'ny ankapobeny, ny fanofanana dia manala pole, saber na sabatra.
Noho izany, ny lavaka dia manondro tsikelikely ny fitomboan'ny olona iray. Amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny hazomainty fotsy izy ary manana hery goavana goavana.
Ny sabora koa dia natao hanapahana sy hikapoka. Ny sabatra rehetra dia manana endrika boribory ary misy teboka, kofehy, kodiarana ary fefy. Ny fametahana sabatra dia miavaka amin'ny hery amam-batana sy fiantraikany goavana.
Ny sabatra dia fitaovam-piadiana fohy sy malefaka. Ny fahamendrehany dia hoe mora ary manome fahafahana anao hanatanteraka hetsika ara-teknika isan-karazany.
Callanetics ho an'ny Beginners
Ahoana no hianaranao hanao somersault?
Multifunction Power Simulator
Fandaharam-panofanana momba ny fandoroana tavy
Mitondra amin'ny Leysan Utiasheva
Zumba ho an'ny Beginners
Fashion sandals 2015
Ny reraky ny rambony amin'ny tarehy - antony
Ambony bebe kokoa - inona no dikan'izany, avy amin'ny habeny inona no manomboka ny habeny?
Tomaty mavo miaraka amin'ny fampinonoana
Nahoana no tsy mahomby ny fampiofanana?
22 "kendrentsika" ny sarin'ny ankizy
Jesuit quarter ary ny iraka nataon'i Cordoba
Sakafo miaraka amin'ny strawberries - sakafo mahasalama ho an'ny poti-mofo, muffins ary puff pastry
Stylish skirts 2015
Hevitra ho an'ny sary amin'ny fahavaratra
Miboiboika amin'ny kohaka
Gymnastics taorian'ny nofy tao amin'ny kilasy fianarana
Tape ho an'ny clematis amin'ny tanana manokana